पिटिए कप्तान अलि, एकै ओभरमा दिए १८ रन ! - Everest Dainik - News from Nepal
पिटिए कप्तान अलि, एकै ओभरमा दिए १८ रन !
काठमाडौंः यूएईमा जारी टी–१० लिग अन्तर्गत बंगला टाइगर्स विरुद्धको खेल टिम आबुधाबीले खराब सुरुवात गरेको छ । टस जितेर बलिङ रोजेको टिम आबुधाबीले पहिलो ओभरमै १८ रन दिइसकेका छन् ।
आबुधाबीको पहिलो ओभरमा कप्तान मोइन अलि आफैं बलिङमा आएका थिए । उनले आफ्नो पहिलो ओभरमा २ छक्का, १ चौका र २ सिंगलसहित १८ रन खर्चिए । उनको बलमा आन्द्रे फ्लेचरले १७ रन बटुल्न सफल भए ।
याे पनि पढ्नुस टी–१० लिगः सन्दीपको उत्कृष्ट बलिङका बाबजुत कर्नाटक पराजित
बंगला टाइगर्सविरुद्ध पनि नेपाली क्रिकेट टिमका पूवकप्तान पारस खड्का प्लेइङ ११ मा अटाउन असफल भएका छन् ।
याे पनि पढ्नुस कर्नाटकले पायो १३१ रनको लक्ष्य, सन्दीपले लिए २ विकेट
ट्याग्स: टी–१० लिग, बंगला टाइगर्स भर्सेस टिम आबुधाबी
असई र जवानको हत्यामा संलग्न ७ जना तस्कर सार्वजनिक